Dr. Ngun Cung Lian cu "Salai" Hminpu A Phu Lo – Mipi Auaw | Falam Online Media
February 19, 2021 February 19, 2021 Ni Hnem Sung	0 Comments
Ralkap ukhruainak hnuai ih rampi thuron dingih thiah tharmi Dr. Salai Ngun Cung Lian cu Chin mipi in nasaten an soisel ih “Salai” hminpu dingahaphu lo titiangin an dem.
Kawl ralkap nih Myanmar cozah kumpi thuneihnakala hnu ni 18 nakah rampi ukhruainak council thuron pe tuding ihahrilmi minung7hminatarlang.
Hotu dingah Bochuk sangtu Than Htun Oo hriltlinasi ih Dr.Yin Yin Nwe,Daw Zin Zin Oo, Daw Khin Oo Hlaing, Bohmugyi Htain Lin le Chinmi Dr.Salai Ngun Cung Lian te pawl cu sungtel dinhmun in tarlang an si.
“Pu Ngun Cung Lian hi ralkap hmanfungasi le silo ti cu kan thei cianglo. Nan, Facebook ihaca tarmi ṭhenkhat ahcu ralkap rimnam deuhaum.”
“February 10 ihaca tarmi pakhat cu 2020 Myanmar rampi hrilawknak ih vote diklo cazin ti`h, ralkap pawl ih tarmiasi ihashare sawng nakah vote firaṭihnung zia tipawl cu US rampi Daan thawnatehkhin ciamco. Ralkap pawl ih vote diklo an timi hi khihhmuhding pipa um lo miasi. A ca post mi kan zohasi le hram mumal umlomi ralkap auawadinpi tinakasi ih ralkap rimnamasi kan ti thei” tiah mipakhat in FB cahmai ahatarlang.
Dr. Ngun Cung Lian ih FB ca post …
အသဲကြားက မဲ တစ်ပြား၊ ထောင် (၅) နှစ် ပါဗျား –
အမေရိကား မှာတော့ ဆန္ဒမဲကို အလွန်တန်ဘိုးထားပါတယ်။ မဟုတ်မမှန် မဲပေးလို့၊ မဲပေးဘို့တိုက်တွန်းလို့၊ လုပ်ဆောင်လို့ ကတော့ ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအရ (၅)နှစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ မဲပေးတဲ့ ပြည်နယ် ဥပဒေ အရ (?) နှစ် ထောင်နန်းစံ ရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ (၅) နှစ် တောင် ထောင်ချနိုင်တဲ့ ဥပဒေ ထုတ်တာလည်းဆိုတော့ အစိုးရ သက်တမ်းက (၄) နှစ် ဖြစ်တယ်။ မသမာတဲ့ မဲ တစ်ပြားကြောင့် မသမာတဲ့ လူတစ်ယောက် (၄) နှစ် ရွေးကောက်ခံသူ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီတော့ မသမာ မဲ ပေးတဲ့သူကို အနည်ဆုံး (၄) နှစ် ကျော် ထောင်ထဲထည့်ပြီး နိုင်ငံသားတွေ ပေးတဲ့ အခွန်ငွေနဲ့ ထမင်းကျွေးပစ်လိုက်ပါတယ်။
Taxas ပြည်နယ်က အမဲမလေး တစ်ယောက် Class (A) Felony အမှု နဲ့ တရားရုံးက စီရင်ချက်ချတယ်။ မိသားစုတွေက အာမခံ လျှောက်ပေးလို့ ခြေချုပ် (Probation) နဲ့ အပြင်မှာနေတယ်။ မဲပေးချိန် တန်တော့ မဲသွားပေးပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေက ကောင်းတော့ (Probation) နဲ့ နေတဲ့ သူ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်သွားတယ်။ သူမ က (Probation) နဲ့ အပြင်မှာ နေတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်နယ် ဥပဒေ အရ မဲပေးခွင့်မရှိပါ။ သူ့မဲကို ပယ်မဲ စာရင်းမှာ ထည့်တဲ့ အပြင်၊ သူ့ကို ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က တရားစွဲ လိုက်ပါတယ်။ တရားသူကြီးက လည်း ၄ နှစ်ကျော် ထောင်မှာ နေစေ ဆိုပြီး အမိန့် ချလိုက်ပါတယ်။ နဂိုရှိထားတဲ့ အမှု၊ မဲမပေးသင့်ပဲ ပေးတဲ့အမှု၊ တော်တော် ဒုက္ခရောက်သွားပါတယ်။
ကဲ …. တိုင်းရင်းသား လူမျိုး (၈) မျိုး နဲ့ မျိုးနွယ်စုများ စုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကတော့ တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နဲ့ အညင်သာဆုံး နဲ့ တရားမျှတစွာ ရှေ့ဆက် သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရုံမှ အပ အခြားနည်းလမ်း မရှိတော့ပါ။
ဖက်ဒရယ်ရုံးအတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတစ် ဦး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
(၁) မည်သူ့ကိုမဆို သိလျက်နှင့် တမင်တကာခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားပေးခြင်း၊
(က) မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မဲပေးခြင်း၊
(ခ) မည်သူကိုမဆို မဲပေးရန်၊ မဲပေးရန် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ရန် မည်သူ့ကိုမဆို တိုက်တွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ကူညီခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
(ဂ) ဤအခန်းတွင် မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆို ကျင့်သုံးခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
(၂) ပြည်နယ်၏ ပြည်သူများကို တရားမျှတပြီး ဘက်မလိုက်သော ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ် အားသိလျက်နှင့် တမင်တကာဖြစ်စေ၊
(က) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများအရ ရုပ်ပစ္စည်း မှားယွင်းသော၊ အယောင်ဆောင်ပြီး သို့မဟုတ် လိမ်လည်သူဖြစ်ကြောင်း လူသိများသည့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း လျှောက်ထားခြင်းများကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် တင်သွင်းခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
(ခ) ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများအရ ရုပ်ပစ္စည်းမှားယွင်းသော၊ အယောင်ဆောင်ပြီး သို့မဟုတ် လိမ်လည်သူဖြစ်ကြောင်း လူသိများသည့် ဆန္ဒမဲများကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ခေါင်းစဉ် ၁၈ နှင့်အညီ ဒဏ်ငွေချမှတ်ရမည် (မည်သည့်ဥပဒေကိုမဆိုအငြင်းပွားမှုများကိုဘဏ္ဍာ ရေးဌာန၏အထွေထွေရန်ပုံငွေ၊ အထွေထွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ (ခေါင်းစဉ် ၃၁၊ ပုဒ်မ ၃၃၀၂ အရ) အရပေးရမည်)) သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ထက်မပိုသော နှစ်မျိုးလုံး သို့မဟုတ်။
Dr. Ngun Cung Lian cu US ram um Daanlam thiamsang Chinmiasiih, Thein Sein cozah san khalah thuron petu dinhmun in Myanmar Politics aharak tel dah zoasi.
Tuṭum, Kawl ralkap ukhruainak hnuai ih rampi thuron dinhmun ih hriltlinasi mi thu ah amah Dr.Ngun Cung Lian in mipi hnen ah theihternak zianghmanatuah hrih loasi.
← Sansungdaih Democracy ni eng kan ram ahaeng thlang ding – Saya James Thang
March4: Pu Trump ṭantu ṭhenkhat in Capitol Innpi siim tum sal in cangvainak nei →
Missionary Tv. Rintluanga, Ti sung ah Tla That